राष्टिय – new of update
January 24, 2021 January 28, 2021 adminLeaveaComment on कोरोना खोप किन्न एनआरएनएले सहयोग गर्ने
छलफलमा बोल्दै संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सन्जीव सापकोटाले नेपाल सरकारले नेपालमा खोप लैजान प्रयाप्त तयारी नगरेको अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देशमा खोप भित्राउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै डा. सुधीर खनालले नेपालले ल्याउने खोप डब्लुएचओबाट मान्यता प्राप्त हुनु पर्नेमा जोड दिए । तत्कालका लागि बेलायत, जर्मनी लगायतका मुलुकले उत्पादन गरेका […]
December 22, 2019 January 27, 2021 adminLeaveaComment on यस्तो बन्नेछ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला भिडियोमा हेर्नुस